Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda Puntland oo muddo Lix Bilood ah wax mushaharooyin ah qaadan iyo Gadoodka Ciidamada oo soo kordhaya. | WARARKA PUNTLAND
Home Wararkii Hore akhriso Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda Puntland oo muddo Lix Bilood ah wax mushaharooyin...
Ciidamada iyo Shaqaalaha Dowladda Puntland oo muddo Lix Bilood ah wax mushaharooyin ah qaadan iyo Gadoodka Ciidamada oo soo kordhaya.
Waxaa weli taagan gadoodka iyo baxsashada ciidamada Puntland la gadoodayaan Mushahar la’aan iyo xil ka qaadis lagu sameeyey oo ay qaar kood diidan yihiin.
Waxaa doraad booyad biyood oo Ciidanka Darawiishta Buurta Galgala ay la goosteen afar ka mid ah Ciidanka Buurta fadhiya, waxaana laga soo qabtay meel wax yar dhanka bari ka xigta Ufeyn iagoo booyada la goosanaya. Ragga gaadiidka la goostay ayaa ka cabanaya mushahar la’aan lix bilood ah, ayna buurta galgalo hor fadhiyaan cadowga Puntland sida ay hadalka u dhigeen askarta baxsadka ee la soo qabtay doraad.
Waxaa kaloo waararku sheegayaan in Ciidamada Buurta Galgala qeybo badan oo ka mid ah dhanka Gobolka Sanaag u baxsadeen iyagoo ka cabanaya dhaqaalo xumo sarakiisha iyo Ciidanka ka soo wajahday Wasaaradda Maaliyadda Puntland. Waxaa intaas dheer isbedelo hab qabiil ku dhisan Wasiirka dad la heyb ah durba ku soo gurayo meelaha muhiimka wasaaradda sida Gudoomiyaha Canshuuraha beriga oo Nin reer Laascaano inta laga qaaday lagu bedelay nin reer Qardhood ah.
Sidoo kale laanta Kastamada ayaa laga qaaday Qaasim oo ah Nin wadaalmuge ah oo xilkaas oo kaliya ay ka hayeen Puntland ayaa waxaaa isna lagu bedelay Nin reer Boorame ah oo gabar reer Qardhood ah qaba. Cadaalad darada ayaa kor u sii kacday ka dhex jirta wasaaradda Maaliyadda Dowladda Puntland tan iyo xilligii uu yimi wasiirkan cusub oo lagu Eedeynayo durba in tiro reerkiisa ah uu ku soo qoray Meelo muhiim ah oo ilo dhaqaale leh, halka tiro reero horay u joogay meelahaas xilalkoodii dibadda dhigay.
Shaqaalaha Wasaradaha ayaa iyagu qaarkood lix bilood ka badan ay ka maqan yihiin Mushaharooyinkooda iyo adeeg iyo guno Shaqaale. Xaalku si kasta ha ahadee waxaa isa soo taraya guuldarooyin baahsan oo dhanka dhaqaalaha, maareynta siyaasadda gudaha iyo xiriirka caalamiga ee dibada oo sii liicay tan iyo intii xukuumada cusub la dhisay.
Dadka inta siyaasadda rog rogtaa waxay tilmaamayaan in aan waxba iska bedelin Wasaaradda Maaliyada tan iyo mudadii loo magacabay wasiir cusub oo aqoonyahan ah, balse aan la iman wax isbedel shaqo ama dhaqaale iyo bixin mushahar iyo adeeg.
Wasaaradaha kale ayaa iyaguna fadhiid aan dhulka ka kicin noqday tan iyo markii lagu dhawaaqayna iskushandheyntii koobneyd ee Golaha wasiirada wax isbedel weyn inaanu ku imaan golihii dowladda Puntland, waxaana la hadal hayaa hadda in aanay aheyn iskushandheyntii dhacday dhowaan mid la filayey in ay wax ka bedesho gudaha Puntland, waayo kama dhex muuqan rag waayo aragnimo siyaasadeed leh oo bulshada u soo joogsan karaan.
Si kastaba ha ahatee waxaa xaalku marayaa hadda dhaqaalaha Puntland oo liita, wasaaradihii oo fadhiid sii noqonaya, wasiir, wasiir ku xigeen, wasiirudowlayaal iyo Agaasimayaal aan is dhaamin ayaa horjoogayaal u wada ah dhamaan hay’adaha dowladda Puntland.
Dhinac kale waxaa socda lacago faalso ah oo koox ganacsato ay isku beel yihiin Gaas ay leeyihiin Makiinada sameysa, waxaana laga cabsi qabaa lacagahsaas faalsada haddii ay ka soo baxaan hoolka Bangiga in ay sii huriso xaalka maceeshada Puntland hadaan loo helin qaab qorsheysan oo si miisaaman ku dhisan.
This post has already been read 45524
Previous articleGabadhii ugu horaysay oo soomaali ah oo taxi kaga shaqaysata dalka driving car
Next articleGabadhii ugu horaysay oo soomaali ah oo taxi kaga shaqaysata dalka driving car+Sawiro